कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टेलिभिजन कार्यक्रम 'ऐना' सञ्चालन गर्ने | News Nepal
काठमाडाैँ । द होराइजन मल्टिमिडियाले निर्माण गर्ने सामाजिक विषयवस्तुमाथिको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘ऐना’ माघ ७ गतेदेखि प्रसारणमा आउने भएको छ ।
काठमाडौंमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रम ‘ऐना’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइयो।
प्रकाशित मिति : 2020-12-17
गजल: बालुवाटार गोठ बाट दाम्लो चुडाँलेर एउटा साँढे….
गजल आजकाल बालुवाटार गोठ बाट दाम्लो चुडाँलेर एउटा साँढे...
कविता अब आँसु खसाउनु पर्दैन रगत बगाउनु पर्दैन नेपाली मन अब फुट्दैन राष्ट्रिय एकता टुट्दैन शान्ति अब यहाँ...
प्रभु क्यापिटल टिकटक च्यालेन्जः प्रभु हेलिकप्टरमा गोसाइँकुण्ड घुम्ने अवसर
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले टिकटक क्याम्पियन आयोजना गरिरहेको छ । आफ्ना टिकटक भिडियोहरुबाट लोकप्रियता कमाउन सफल रेश्मा घिमिरेले आफ्नो टिकटक...
मनोजसँग नाम जोडिएपछि वर्षा आक्रोसित !
काठमाडाैँ । दोस्रो विवाहको तयारी गरिरहेका कलाकार मनोज गजुरेलसँग नाम जोडिएपछि अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी आक्रोसित भएकी छन् । कतिपय अनलाइन...
काठमाडाैँ । नेपाल चलचित्र संघले आगामी पुस १० गतेदेखि फिल्म हल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले चलचित्र घर...
पशुपतिमा शतबीज छर्नेको घुइँचो (फोटो फिचर)
काठमाडाैँ । बालाचतुरर्दशीको अवसरमा आज पनि मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ । पशुपतिनाथसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिरमा शुक्रबार साँझदेखि...
अभिनेत्री श्‍वेता खड्काले विजयेन्द्रसँग कसिन् लगनगाँठो
काठमाडौं । अभिनेत्री श्‍वेता खड्काले सोमबार विजयेन्द्रसिंह रावतसँग लगनगाँठो कसेकी छन्। दुई परिवारका सदस्य र सीमित निम्तालुबीच उनीहरुको बिहे गोकर्ण...
काठमाडाैँ । हिक्मत रावतको नयाँ गीत 'फूल काँडा' सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ‘फूल काँडा’ बोलको गीतमा प्रेम...
काठमाडाैँ । कलाकार मनोज गजुरेलले दोश्रो विवाह गर्ने भएका छन्। उनले आफू छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको स्वीकार गरे।...